Woreteetee a, Fa Wo Ho To Yehowa Nyankopɔn So | Ɔwɛn-Aban Adesua
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai American Sign Language Amharic Amis Arabic Armenian Aukan Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Cuban Sign Language Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zulu
ADESUA ASƐM 25
“Me honhom abotow.”—1 SAM. 1:15.
DWOM 30 M’agya, Me Nyankopɔn, ne M’adamfo
1. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yetie kɔkɔbɔ a Yesu de mae no?
YESU hyɛɛ nkɔm faa nna a edi akyiri no ho. Ɔkaa sɛ: “Monhwɛ mo ho so yiye na . . . asetena mu dadwen anhyɛ mo koma so da,” kyerɛ sɛ, sika a yebenya de ahwɛ yɛn ho ho dadwen anaa da biara da asetena mu haw anhyɛ yɛn so. (Luka 21:34) Ɛsɛ sɛ yetie saa kɔkɔbɔ no. Adɛn ntia? Ɛnnɛ, ɔhaw a ɛreteetee nnipa nyinaa no, yɛn nso yɛfa mu bi.
2. Ɔhaw bɛn na ɛreteetee yɛn nuanom?
2 Ɛtɔ da a, yehyia ɔhaw pii a ɛteetee yɛn wɔ bere koro mu. Momma yɛnhwɛ nhwɛso a edidi so yi. Yɛnhwɛ Ɔdansefo bi a ne din de John. * Yare bi a wɔfrɛ no multiple sclerosis bɔɔ no ma obubui. Ne yere a na ɔne no atena mfe 19 guan gyaw no maa ne ho dwiriw no, na ne werɛ howee. Afei, ne mmabea mmienu gyaee Yehowa som. Bob ne Linda yɛ awarefo. Wɔn nso hyiaa ɔhaw foforo bi a ɛnte sɛ John de no. Wɔn mmienu nyinaa adwuma fii wɔn nsa, na afei na wonni sika a wɔde betua wɔn dan ka, enti na ɛsɛ sɛ wotu. Ɔhaw yi nyinaa akyi no, dɔkota ka kyerɛɛ Linda sɛ wanya komayare bi a ebetumi akum no, na yare foforo bi nso bɔɔ no a na ɛmma ne nipadua ntumi nko ntia yare.
3. Sɛnea Filipifo 4:6, 7 kyerɛ no, awerɛhyem bɛn na yebetumi anya?
3 Sɛ yɛrefa ɔhaw mu a, yebetumi anya awerɛhyem sɛ, Yehowa a ɔyɛ yɛn Bɔfo ne yɛn Agya a ɔdɔ yɛn no nim sɛnea yɛte nka. Yehowa pɛ sɛ ɔboa yɛn ma yegyina nsɛnnennen a yɛrefa mu no ano. (Kenkan Filipifo 4:6, 7.) Bible ka ɔhaw a Onyankopɔn nkoa faa mu no pii ho asɛm. Ɛma yehu nso sɛ Yehowa boaa wɔn ma wotumi gyinaa ɔhaw a na ɛreteetee wɔn no ano. Momma yɛnhwɛ ɛho nhwɛso kakra.
NÁ ELIA YƐ “ONIPA A ƆWƆ NKATE TE SƐ YƐN ARA”
4. Ɔhaw bɛn na Elia faa mu, na dɛn na ohu faa Yehowa ho?
4 Elia som Yehowa wɔ mmere a emu yɛ den mu, na ɔfaa ɔhaw pii mu. Ahemfo a wodii Israel so a wɔanni Yehowa nokware no, na Ɔhene Ahab ka ho. Ɔwaree Baal somfo tirimɔdenfo bi a ne din de Yesebel. Wɔn mmienu de Baalsom hyɛɛ asase no so mã, na wokum Yehowa adiyifo bebree. Elia tumi guanee. Bere a ɔkɔm kɛse bi sii no, ɔde ne ho too Yehowa so ma onyaa ne ti didii mu. (1 Ahe. 17:2-4, 14-16) Afei nso, bere a Elia ne Baal adiyifo ne Baal asomfo dii asi no, Elia de ne ho too Yehowa so. Ɔhyɛɛ Israelfo no nkuran sɛ wɔnsom Yehowa. (1 Ahe. 18:21-24, 36-38) Elia nyaa adanse pii a ɛkyerɛ sɛ na Yehowa reboa no wɔ saa mmere a emu yɛ den no mu.
Yehowa somaa ɔbɔfo bi sɛ ɔnkɔboa Elia ma ɔnsan nyɛ den (Hwɛ nkyekyɛm 5-6) *
5-6. Sɛnea 1 Ahene 19:1-4 kyerɛ no, Elia tee nka sɛn, na dɛn na Yehowa yɛe de kyerɛe sɛ ɔdɔ no?
5 Kenkan 1 Ahene 19:1-4. Nanso, bere a Ɔhemmaa Yesebel kaa sɛ obekum Elia no, ehu kaa Elia. Enti Elia guan kɔɔ Beer-Seba. Elia abam bui araa ma “ɔsrɛe sɛ ne kra nwu.” Dɛn na ɛma ɔtee nka saa? Ná Elia yɛ onipa a ɔtɔ sin; “onipa a ɔwɔ nkate te sɛ yɛn ara.” (Yak. 5:17) Ɛbɛyɛ sɛ adwinnwen ne ɔbrɛ na ɛma ɔtee nka saa. Ebia Elia nyaa adwene sɛ mmɔden a ɔbɔe sɛ ɔbɛma nkurɔfo asom Yehowa no ayɛ kwa, na biribiara nkɔ yiye wɔ Israel, na afei ɔno nko ara ne obi a waka a ɔda so ara resom Yehowa. (1 Ahe. 18:3, 4, 13; 19:10, 14) Ebia nea odiyifo nokwafo yi yɛe no bɛyɛ yɛn nwonwa. Nanso, Yehowa de, na ɔte no ase.
6 Yehowa anka Elia anim sɛ ɔkaa nea ɛhaw no. Mmom, ɔboaa Elia ma ɔsan yɛɛ den. (1 Ahe. 19:5-7) Akyiri yi, Yehowa maa Elia huu ne tumi kɛse, na ɛno boaa Elia ma ɔteɛteɛɛ n’adwene. Afei Yehowa ka kyerɛɛ Elia sɛ ɔda so ara wɔ nnipa 7,000 wɔ Israel a wɔansom Baal. (1 Ahe. 19:11-18) Yehowa yɛɛ nneɛma pii maa Elia hui sɛ ɔdɔ no.
SƐNEA YEHOWA BƐBOA YƐN
7. Yɛhwɛ sɛnea Yehowa boaa Elia no a, awerɛhyem bɛn na ɛma yenya?
7 Worefa ɔhaw bi a ɛreteetee wo mu anaa? Ɛyɛ awerɛkyekye pa ara sɛ yɛahu sɛ na Yehowa te Elia ase! Wei ma yenya awerɛhyem sɛ, saa ara nso na ɔte nsɛnnennen a yɛrefa mu no ase. Onim nea yebetumi ayɛ ne nea yentumi nyɛ, na nea ɛwɔ yɛn adwene ne yɛn koma mu mpo, onim. (Dw. 103:14; 139:3, 4) Sɛ yesuasua Elia na yɛde yɛn ho to Yehowa so a, Yehowa bɛboa yɛn ama yɛagyina ɔhaw a ɛreteetee yɛn no ano.—Dw. 55:22.
8. Dɛn na Yehowa bɛyɛ de aboa wo ama woagyina ɔhaw a worefa mu ano?
8 Sɛ worefa ɔhaw mu a, ebetumi ama woanya adwene sɛ ɛto rentwa da, na ebetumi ama w’abam abu. Sɛ ɛba saa a, kae sɛ Yehowa bɛboa wo ama woatumi agyina ano. Dɛn na ɔbɛyɛ de aboa wo? Ɔka kyerɛ wo sɛ ka wo haw ne nea worefa mu kyerɛ no, na obetie wo sufrɛ. (Dw. 5:3; 1 Pet. 5:7) Enti bɔ Yehowa mpae mpɛn pii na ka wo haw kyerɛ no. Ɛwom sɛ, ɛnnɛ ɔne wo renkasa tee sɛnea ɔne Elia kasae no de, nanso ɔnam n’Asɛm Bible, ne n’ahyehyɛde no so kasa kyerɛ wo. Sɛ wokenkan Bible a, emu nsɛm no betumi ama woanya awerɛkyekye ne anidaso. Bio nso, wo nuanom Kristofo betumi ahyɛ wo nkuran.—Rom. 15:4; Heb. 10:24, 25.
9. Dɛn na yɛn adamfo bi a yɛwɔ ne mu ahotoso betumi ayɛ de aboa yɛn?
9 Yehowa ka kyerɛɛ Elia sɛ ɔmfa n’adwuma no bi nhyɛ Elisa nsa. Saa a Yehowa yɛe no maa Elia nyaa adamfo pa a sɛ n’abam bu a na obetumi aboa no ama wagyina ano. Saa ara na yɛn nso sɛ yɛn abam bu na yɛka nea yɛrefa mu no kyerɛ yɛn adamfo bi a yɛwɔ ne mu ahotoso a, obetumi aboa yɛn ama yɛagyina ano. (2 Ahe. 2:2; Mmeb. 17:17) Sɛ ɛyɛ wo sɛ wunni obiara a wobɛka w’asɛm akyerɛ no a, bɔ Yehowa mpae na ɔmmoa wo mma wunnya Kristoni bi a ne ho akokwaw a obetumi ahyɛ wo nkuran.
10. Sɛn na Elia asɛm no ma yenya anidaso sɛ yebetumi agyina ɔhaw ano, na sɛn na bɔhyɛ a ɛwɔ Yesaia 40:28, 29 no betumi aboa yɛn?
10 Yehowa boaa Elia ma ogyinaa ne haw ano, na ɔde nokwaredi somee mfe pii. Elia asɛm no ma yenya anidaso. Ebia yɛbɛfa ɔhaw bi mu ama ateetee yɛn pa ara, na ebetumi abɔ yɛn yare na ama yɛabotow. Nanso, sɛ yɛde yɛn ho to Yehowa so a, ɔbɛma yɛn tumi a ɛbɛma yɛatumi akɔ so asom no.—Kenkan Yesaia 40:28, 29.
HANAH, DAWID, NE “ASAF” DE WƆN HO TOO YEHOWA SO
11-13. Onyankopɔn asomfo mmiɛnsa bi a wɔtenaa ase tete no faa ateetee mu. Ɛkaa wɔn sɛn?
11 Nnipa foforo a Bible ka wɔn ho asɛm nso faa ateetee mu. Wɔn mu baako ne Hanah. Ná onni ba, na ne kora a na ɔwɔ mma no dii ne ho fɛw yayaayaw; wei hyɛɛ Hanah aniwu, na ɛma ɔteetee pa ara. (1 Sam. 1:2, 6) Ateetee pii a Hanah faa mu no ma odii awerɛhow pa ara ma osui, na na ne kɔn nnɔ aduan.—1 Sam. 1:7, 10.
12 Ɔhene Dawid nso, ɛtɔ da a, na adwinnwen hyɛ no so. Wo de, yɛnhwɛ ɔhaw pii a ɔfaa mu. Mfomso pii a odii maa n’ahonim buu no fɔ pa ara. (Dw. 40:12) Ne dɔba Absalom sɔre tiaa no, na ɛmaa Absalom faa mu wui. (2 Sam. 15:13, 14; 18:33) Afei, Dawid nnamfo pa ara mu baako yii no mae. (2 Sam. 16:23–17:2; Dw. 55:12-14) Nnwom a Dawid kyerɛwee no, emu pii ma yehu sɛnea n’abam bui ne sɛnea na ɔwɔ Yehowa mu ahotoso kɛse.—Dw. 38:5-10; 94:17-19.
Dɛn na ɛboaa odwontofo no ma otumi san de anigye som Yehowa? (Hwɛ nkyekyɛm 13-15) *
13 Akyiri yi, odwontofo bi ani beree abɔnefo asetena. Ɛbɛyɛ sɛ na odwontofo no fi Asaf a na ɔyɛ Lewini no abusua mu, na na ɔsom wɔ “Onyankopɔn kronkronbea kɛse no mu.” Saa odwontofo yi abam bui, na ɛmaa ne werɛ howee, na na n’ani nsɔ nea ɔwɔ. Ofii ase nyaa adwene sɛ, sɛ obi som Onyankopɔn a, onnya nhyira ahe biara.—Dw. 73:2-5, 7, 12-14, 16, 17, 21.
14-15. Yehowa asomfo mmiɛnsa a wɔn ho nsɛm wɔ Bible mu no hwehwɛɛ mmoa fii Yehowa hɔ. Dɛn na yesua fi wɔn asɛm no mu?
14 Yehowa asomfo anokwafo mmiɛnsa a yɛaka wɔn ho asɛm no nyinaa hwehwɛɛ mmoa fii Yehowa hɔ. Wɔbɔɔ Yehowa mpae kaa nea ɛhaw wɔn kyerɛɛ no. Nea enti a na wɔreteetee no, woyii wɔn yam kaa ho asɛm kyerɛɛ Yehowa. Wɔkɔɔ Yehowa asɔrefie daa kɔsom no.—1 Sam. 1:9, 10; Dw. 55:22; 73:17; 122:1.
15 Yehowa yam hyehyee no maa wɔn na otiee wɔn mu biara. Hanah nyaa asomdwoe. (1 Sam. 1:18) Dawid kaa sɛ: “Ɔtreneeni amanehunu dɔɔso, nanso Yehowa gye no ne nyinaa mu.” (Dw. 34:19) Akyiri yi, odwontofo no tee nka sɛ Yehowa ‘kura ne nsa nifa,’ na ɔrema no afotu pa. Ɔtoo dwom sɛ: “Me de, Onyankopɔn a mɛbɛn no no ye ma me. Awurade Tumfoɔ Yehowa na mede no ayɛ me guankɔbea.” (Dw. 73:23, 24, 28) Dɛn na yesua fi wɔn asɛm no mu? Ɛtɔ da a, ɔhaw betumi ahyɛ yɛn so araa ma ateetee yɛn. Nanso, sɛ yedwinnwen sɛnea Yehowa aboa afoforo ho, na yɛde yɛn ho to no so bɔ no mpae, na yɛyɛ nea ɔka sɛ yɛnyɛ biara a, yebetumi agyina ɔhaw no ano.—Dw. 143:1, 4-8.
FA WO HO TO YEHOWA SO NA WOATUMI AGYINA ƆHAW ANO
Mfiase no, na ɛyɛ onuawa bi sɛ ɔntew ne ho, nanso bere a ɔhwehwɛɛ akwan a ɔbɛfa so aboa nkurɔfo no, nneɛma sesae ma ɛkɔɔ yiye maa no (Hwɛ nkyekyɛm 16-17)
16-17. (a) Adɛn nti na ɛnsɛ sɛ yɛtew yɛn ho? (b) Dɛn na yɛbɛyɛ na ama yɛasan ayɛ den?
16 Yesua ade foforo fi saa nnipa mmiɛnsa no asɛm no mu. Ɛne sɛ, ɛnsɛ sɛ yɛtew yɛn ho fi Yehowa ne ne nkurɔfo ho. (Mmeb. 18:1) Nancy kunu gyaw ne hɔ, na ɛma ɔteetee pa ara. Nancy kaa sɛ: “Ɛtɔ da a, na mempɛ sɛ mihu obiara anim anaa mekasa obiara ho. Nanso, sɛ metew me ho a, na ɛma me werɛ how pa ara.” Bere a Nancy hwehwɛɛ akwan a ɔbɛfa so aboa nkurɔfo a wɔn nso refa ateetee mu no, nneɛma kɔɔ yiye maa no. Ɔkaa sɛ: “Sɛ afoforo reka wɔn haw a, na meyɛ aso tie wɔn. Mihui sɛ, sɛ minya tema kɛse ma wɔn a, na ɛmma minsu me ho mmɔbɔ pii.”
17 Sɛ yɛkɔ asafo nhyiam a, yebetumi asan ayɛ den bio. Yɛwɔ asafo nhyiam ase a, yɛma Yehowa nya hokwan foforo ‘boa yɛn, na ɔkyekye yɛn werɛ.’ (Dw. 86:17) Yɛkɔ hɔ a, ɔnam ne honhom kronkron, n’Asɛm, ne ne nkurɔfo so hyɛ yɛn den. Asafo nhyiam ma yɛn mu biara nya hokwan ‘nya nkuranhyɛ fi ne yɔnko hɔ.’ (Rom. 1:11, 12) Onuawa bi a ne din de Sophia kaa sɛ: “Yehowa ne yɛn nuanom Kristofo na wɔboaa me ma mitumi gyinaa me haw ano. Asafo nhyiam ne ade a na ɛho hia me pa ara. Mahu sɛ, sɛ meyere me ho yɛ asɛnka adwuma no, na mebɔ me ho mmɔden wɔ asafo no mu a, ɛma mitumi gyina ateetee ne adwinnwen ano yiye.”
18. Sɛ yɛn abam bu a, dɛn na Yehowa betumi ayɛ ama yɛn?
18 Sɛ yɛn abam bu a, momma yɛnkae sɛ Yehowa ahyɛ yɛn bɔ sɛ obeyi ɔhaw afi hɔ korakora daakye, na wahyɛ yɛn bɔ nso sɛ ɔbɛboa yɛn ama yɛagyina ɔhaw ano nnɛ. Sɛ yɛn abam bu na yɛte nka sɛ yɛn anidaso asa a, Yehowa ma yenya “ɔpɛ” ne ahoɔden a yɛde begyina ano.—Filip. 2:13.
19. Awerɛhyem bɛn na Romafo 8:37-39 ma yenya?
19 Kenkan Romafo 8:37-39. Ɔsomafo Paulo maa yɛn awerɛhyem sɛ biribiara ntumi ntew yɛn mfi Onyankopɔn dɔ ho. Yɛbɛyɛ dɛn aboa yɛn nuanom a wɔrebɔ mmɔden sɛ wobegyina ateetee ano? Adesua a edi hɔ no, yɛbɛhwɛ sɛnea yebetumi asuasua Yehowa, na yɛanya ayamhyehye ama yɛn nuanom bere a wɔrefa ateetee mu na yɛaboa wɔn.
Yɛhwɛ sɛnea Yehowa boaa Elia ma otumi faa ateetee mu no a, dɛn na yebetumi asua afi mu?
Nnipa mmiɛnsa a wɔn ho asɛm wɔ Bible mu a yɛasusuw wɔn ho no tumi faa nneɛma a na ɛreteetee wɔn no mu. Dɛn na yebetumi asua afi wɔn asɛm no mu?
Dɛn na yɛbɛyɛ na ama yɛatumi afa nneɛma a ɛteetee yɛn mu?
DWOM 44 Mmɔborɔni Mpaebɔ
^ nky. 5 Sɛ yedwinnwen pii anaa dadwen hyɛ yɛn so kyɛ a, ebetumi ahaw yɛn nipadua na ama yɛn abam abu. Dɛn na Yehowa betumi ayɛ de aboa yɛn? Yɛbɛhwɛ sɛnea Yehowa boaa Elia ma otumi gyinaa ɔhaw ano. Nnipa foforo bi nso ho nsɛm wɔ Bible mu a ɛbɛma yɛahu sɛnea yɛbɛkɔ Yehowa nkyɛn akɔhwehwɛ mmoa bere a yɛreteetee.
^ nky. 2 Wɔasesa din ahorow a ɛwɔ asɛm yi mu no.
^ nky. 53 MFONI HO NKYERƐKYERƐMU: Bere a na Elia ada no, Yehowa bɔfo nyanee no bɔkɔɔ, na ɔmaa no paanoo ne nsu.
^ nky. 55 MFONI HO NKYERƐKYERƐMU: Odwontofo bi a ɛbɛyɛ sɛ na ofi Asaf abusua mu ani gye nnwom kyerɛw ho, na ɔne ne mfɛfo Lewifo reto nnwom.